अल्लो बाट धागो र कपडा उत्पादन::Online News Portal from State No. 4
अल्लो बाट धागो र कपडा उत्पादन
बागलुङ, ३० कार्तिक — जंगलमा पाईने अल्लो ल्याएर प्रशोधन गर्दै धागो र कपडा उत्पादन गर्न पाएपछि ताराखोलाका महिलाहरु व्यवसायिक बनेका छन् । उनीहरुले अल्लोको धागो कात्ने र कपडा बुन्ने काम थालेका हुन् । झण्डै २० बर्ष अघिदेखि तालिम पाएका महिलाले अल्लोको धागो उत्पादन गरेर कपडाका सामाग्री पनि बनाएका हुन् । जंगलमा पुगेर चाल्ने सिस्नो (अल्लो) ल्याउने, प्रशोधन गर्ने र धागो कात्ने काममा उनीहरुको दैनिकी बनेको छ । बलियो र गुणस्तर हुने भएकोले अल्लोको कपडा धेरैले मन पराउँछन् । बिदेशीले पनि मन पराउने भएकोले धेरै महंगो मूल्यमा पनि बिक्री हुने अल्लो उत्पादनमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, जिल्ला लघुउद्यमी समूह लगायतले पहल गरेका थिए । साथै उत्पादनलाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकाले पनि पहल गरेको हो । ताराखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ मा यो उत्पादन बढी छ । त्यहाँका झण्डै ३० महिलाले व्यवसायिक रुपमा अल्लो उत्पादन गरिरहेका छन् । सिस्नोको लोकता निकालेपछि पिठो मिसाएर पकाउने, खोलामा लगेर पखाल्ने, कुटेर धुलो पार्ने र सुकाएपछि कातेर धागो निकाल्ने चरण पुरा भएपछि मात्र अल्लोका कपडा बुन्न मिल्छ । ‘काम सजिलो छैन, तर जंगलको सिस्नोलाई कपडा बनाएर बजारमा बिक्री गर्दा राम्रो कमाई पनि हुन्छ’ सपनादेवी बुढाले भनिन्, ‘जैबिक उत्पादनको कपडाबाट आम्दानी र रोजगारी पनि मिलेको छ ।’ ताराखोला–४ लेबाङस्थित जुनतारा साना लघुउद्यम समूहमा बुढा सहितका १४ उद्यमी महिला सहभागी छन् । हरेकले बर्षेनी अल्लो धागो कातेर २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । ‘घरघरमा उद्यमी बनाउने अभियानमा अल्लोका समूहले पनि साथ दिएका छन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘स्थानीय उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा वडा र टोल–टोलमा नयाँ प्रकारका उद्यम संचालनमा पहल गरेका छौं ।’ लेवाङ जस्तै सोनाम अल्लो कपडा उत्पादन समूहमा पनि १५ जनाभन्दा धेरै महिला उद्यमी आबद्ध छन् । उनीहरुले धागो कात्ने मात्र नभई कपडा बुन्ने काम गर्छन् । पच्छ्यौरा, स्विटर, कोट, झोला, सल बनाइरहेका उद्यमीले अल्लोकै जुत्ता पनि बनाउन थालेका छन् ।
बजारमा अल्लोको जुत्ताले निकै चर्चा पनि पाएको छ । अल्लो कपडा मात्र प्रयोग गरेर जुत्ता बनाएर बिक्री गरेको समेत नेपालमै पहिलो भएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । यहाँ पुरुषलाई प्रयोग हुने बस्तु पनि उत्पादन शुरु भएको हो । ‘नयाँ उत्पादन र पुरुषहरुले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने अल्लो सामाग्री बनाउन जुत्ता बनाउन शुरु गरेका हौं’ सोनाम अल्लो समूहकी सदस्य भिमा रोकाले भनिन्, ‘पहिलो पटक भएकोले धेरै बनाएका छैनौं, अर्को बर्ष बढाउँदै लैजाने योजना छ ।’ उनीहरुले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा अल्लोको जुत्ता बिक्री गरिरहेका छन् । लेबाङका समूहमा आवद्व धेरै महिलाले सोनाम समूहमा धागो दिने गरेको अध्यक्ष जसमती रोकाले बताईन् । ताराखोलामा मात्र अल्लोको धागो कात्ने, कपडा बुन्ने लगायतको काम गर्ने ३० महिला उद्यमी छन् । अल्लो प्रशोधनको क्रममा सघाएर रोजगारी पाउने ५० बढी भएको रोकाले बताईन् । परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि काम सिकाईरहेको अर्की उद्यमी दिलमाया रोकाले बताईन् । लघुउद्यम बिकास कार्यक्रममार्फत दशक अघिदेखि ताराखोलामा धागो उत्पादन र कपडा बुन्ने काममा सहयोग भएको थियो । तालिम, घरेलु मेसिन र बजारीकरणका लागि जिल्ला लघुउद्यमी समूह संघ, संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र र गाउँपालिकाले सहयोग गरेको हो । गाउँपालिकाले दुवै समूहमा हाते मेसिन सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ‘पूर्ण रुपमा विकास भएको अल्लो संकलन गर्ने उपयुक्त मौषम मंसिर र पुस होे’ समूहकी अर्की सदस्य पूर्णमाया बुढाथोकीले भनिन्, ‘बार्षिक हरेकले दुई तीन लाख रुपैयाँ कमाउने बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।’ केही महिलाले घरधन्दामा लागेकोले सोचेजस्तो कमाई गर्न सकेका छैनन् । समय दिएर काम गर्दा सबैले राम्रो कमाई गर्न सक्छन् । बजारमा अल्लो कपडा प्रतिमिटर ५ सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । पर्यटकीय स्थानमा लैंजादा त्योभन्दा धेरै कमाई गर्न सकिने सोनाम अल्लो उद्यमी समूहकी अध्यक्ष बिष्णु रोकाले बताईन् । सदरमुकाममा पनि अल्लो बिक्री केन्द्र स्थापना भएको छ । भकुण्डेकी यामकुमारी थापाले संचालन गरेको सौगात गृहमा पाईने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी र पाहुनाहरुले छानेर किन्ने गरेका छन् । सौगात गृहमा अल्लोसँगै ढाकाका सामाग्री पनि पाईन्छ । दिनभर काम गर्नेले ३ मिटरसम्म कपडा बुन्न सक्छन् ।